कोरिया उड्न नपाएकाहरुको गुनासो : कि रोजगारी देउ सरकार नत्र रेमिट्यान्स छाडिदेउ आज शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा पुन: प्रदर्शन ! – Korea Pati
कोरिया उड्न नपाएकाहरुको गुनासो : कि रोजगारी देउ सरकार नत्र रेमिट्यान्स छाडिदेउ आज शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा पुन: प्रदर्शन !
July 10, 2020 July 10, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरिया उड्न नपाएकाहरुको गुनासो : कि रोजगारी देउ सरकार नत्र रेमिट्यान्स छाडिदेउ आज शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा पुन: प्रदर्शन !
दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरुले आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरु बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भए पनि कोरिया जान नपाएकाहरुले आज काठमाडाैंकाे शान्तिबाटिकामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् ।
२ हप्ता भित्र सरकारले कोरिया पठाउनको लागि पहल नगरे करिब ४५ सय जनाको रोजगारी गुम्न सक्छ, प्रर्दशनका संयोजक अजय सोडारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सो रोजगारी गुमेपछि अधिकांशको करिब ४ वर्षको मेहेनत खेर जान्छ ।
यसअघि पनि कोरिया जानको लागि श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र इपीएस कार्यालय पटक पटक धाएको तर समस्या समाधानको बाटो तर्फ उन्मूख हुन नसकेकोले सडकमा आउन बाध्य भएको प्रदर्शकाकारीहरु बताउँछन् ।
आफूहरुको समस्या समाधानको लागि वातावरण नबनाएर सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि गलत रबैया देखाएको प्रदर्शनकारीको आरोप रहेको छ । प्रदशर्नकारीले सरकारले आफ्नो समस्याको समाधान नगरेको खण्डमा क्रान्तिकारी बन्न बाध्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
नेपाल सरकारको कारणले ६ सय भन्दा बढीको भिषा रद्द भएको उनीहरुको भनाइ छ । रोजगार दाता कम्पनीले बारम्बार आउ भनेर बोलाएको समयमा सरकारले उडान बन्द गर्दा पाएको रोजगार गुम्न सक्ने अवस्था आएको प्रदर्शनकारीहरुको गुनासो छ ।
‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सरकारले वेवास्था गरे बालुवाटार घेर्न बाध्य हुन्छौँ’, संयोजक सोडारीले भन्नुभयो । साथै उहाँले आफ्नो मागको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउन खोज्दा सचिवालयले समय नमिलाएको भन्दै गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने सोडारीको भनाइ छ । प्रदर्शनमा गरिखान दे सरकार, सक्छौँ भने देशमै रोजगार देउ सक्दैनौँ भने हाम्रो भविष्य नबिगार सरकार, कि रोजगारी देउ, कि रेमिट्यान्स छाडिदेउ, जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
विहिवार वेपत्ता भएका दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलका मेयर मृ’त फेला
कोरोनाको उच्च जोखिमयुक्त देशबाट कोरिया आउने विदेशी नागरिकले अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने !
अष्ट्रेलियाबाट आयात हुँदै आएका मासु तथा अण्डामा कोरियाले प्रतिबन्ध लगायो !
August 2, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरियामा क्वारेन्टाइन नियम नमान्ने १७ जना विदेशीलाई देश निकाला,५३१ लाई कारबाही
June 13, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
उत्तर कोरियाद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन सम्बन्धि डाटा ह्याकको प्रयास
November 5, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने